Amnesty oo ka dayrisay xaaladda muslimiinta Burma - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dadka Rohingya oo ka qaxaya xad gudubla lagu hayo. sawir: MUNIR UZ ZAMAN
Amnesty oo ka dayrisay xaaladda muslimiinta Burma
La daabacay tisdag 21 november 2017 kl 10.11
Warbixin cusub ayaa lagu sheegay in xaaladda dadka laga tirada badan yahay ee muslimiinta waddanka Burma ee lagu magacaabo Rohingya ay tahay mid la barbardhigi karo cunsuriyaddii ka jirtay waddanka koonfurta Afrika ee apartheid.
Ururka u dooda xuqquuqda aadamaha ee lagu magacaabo Amnesty International ayaa warbxintan ku sheegtay in ay wareysteen markhaatiyaal u cadeeyey cusunsuriyad baahsan, sidoo kalena ay iyaga u baadhay xaaladda dadkan oo arkeen cusuriyadda iyo xadgudubyo.
Amnesty waxaa ay sheegtay in dadkan lagu khasbay in ay ku noolaadaan xaryo qoxoonti, halkaas oo ay aad u yartahay fursada ay u haystaan adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada. Inta badan looma ogola in ay ka baxaan xaryahan, marka loo ogolaadana looma ogola in ay wadooyinka maraan ee waa in ay toga maraan si ay u gaadhaan xaro kale oo muslimiin kale degen yiihiin.
Wasiirka arrimaha debeda ee Sweden Margot Wallström ayaa hadda joogta waddanka Burma si ay kaga qeeyb qaadato shirka waddamada qaaradaha Aasiya iyo Yurub, ee lagu magacaabo ASEM ayaa la kulantay hogaamiyaha dawladda waddanka Burma, gabadha lagu magacaabo Aung San Suu Kyi. Wallström waxa ay saaka u warantay laanta warar ee raadiyaha Sweden, waxaanay sheegtaya sidan.’
Waxay diiday in ay xitaa isticmaasho erayga Rohingy. Waxay ku macnaynaysaa taariikh dheer oo ay ku sababaynayso in anay isticmaalayn erayga Rohingy. Aniga ayaa ahaa qofka keli ah ee shirkan ay isugu yimaadeen dadka metelaya waddamada Asia iyo Yurub ee isticmaalay.
Margot Wallström, wasiirka arrimaha dibada Sweden